Isbarbardhigga iibsashada qalabka farshaxanka - Geofumadas
Marka aad soo iibsanayso qalabka cabbirka, miisaska isbarbardhigga ayaa aad ugu faa'iideysanaya sameynta go'aamada. Kiiskan, iibsashada xarun guud, marka laga reebo shuruudaha dhaqaalaha, shuruudaha farsamada waxaa ka mid noqon kara:
Qiyaasta ugu yar ee masaafada fog
Xaqiijinta xagasha iyo masaafada
Adeegyada Adeegyada (gudaha)
Shuruudaha tixraaca ee iibsashada xarun guud oo ay samayso Hay'adda Dhaqaalaha ee Quindio ayaa tusaale u ah tan:
Waa hagaag, booqashada, waxaan helay bog Mertind Argentina, halkaasoo ay jirto tiro wanaagsan oo ah jaantusyo isbarbardhiga oo loogu talagalay saldhigyada guud, gps, heerarka iyo mitirka masaafada, heerarka iyo kuwa kale.
Isbarbardhigga Wadarta Goobaha
Taxanaha Daraasad-bixiye ee isbarbardhigga
Isbarbardhigga Browser Taxanaha Meridian
Isbarbardhiga Heerarka laydhka AGL
Isbarbar dhig heerarka Laser SOKKIA
Isbarbardhiga Fadhiga Stanley
Meelaha loo yaqaan 'Stanley TLM'
Qoraalka Stanley TLM
Qoraal-warbixineedka guud ee SOKKIA
Dabcan, isbarbardhiggu wuxuu ku jiraa xuduudaha wax soo saaraha, waxaana jira oo kaliya magaca shirkadaha shirkadu u qaybiso, laakiin waxaa haboon in la kala saaro xiriirka. Waxaa sidoo kale jira jadwallo kale oo ku saabsan nooca qalabka loo baahan yahay sida waafaqsan shaqada loo qabto, sida:
Wadarta guud ee aan u baahanahay?
Heerkee ayaan u baahanahay?
Maxaa qalabiya ayaan u baahanahay?
Halkaan waxaan ka baxayaa iskuxirka, haddii maalin uun ay faa'iido badan tahay, waxaan ku talin lahaa in la soo dejiyo miisaska sababtoo ah waqtigan websaydhka maanta waa ... berrito waligaa waa dhacday ama bedelay domain.
Post Previous«Previous CAD / GIS oo ka mid ah mudnaanta barnaamijyada bilaashka ah
Post Next Bixinta version 8.0.10.0 ee Manifold GISNext »
3 Jawaab ah "Isbarbardhiga loogu talagalay iibsashada qalabka korjoogteynta"
diyaar, guji html waa khalad. Laba ka mid ah way xoogaa culus yihiin sidaa darteed xoogaa xoogaa bay qaateen.
Waxaad i siisaa ogeysii haddii aad raacdo xiriirka jabsan.
Rays, xaq ...
ivansanchez isagu wuxuu leeyahay:
Ma aniga, mise waa isku xirnaanta isbarbardhigga?